Guta reWashington DC rogadzirira kugadzwa kwaVa Donald Trump
Va Trump vari kutora basa riri kusiyiwa naVa Barack Obama avo vange vari pachigaro kwemakore masere.
Nzira dzese dziri kutarisirwa kunge dzaka nanga kuWashington DC kumabiko emusi weChishanu kunyange hazvo kuri kutarisirwa kuti kuchange kune vachange vachiratidzira vachichema chema nezvakasiyana siyina kusanganisira kusafarira hurumende itsva yaVaTrump.
NeMugovera kuri kutarisirwa kunge kune kuratidzira kwemadzimai vari kutarisirwa kubva kunharaunda dzakasiyana siyina vachiti havasi kufara nemabatirwo anotarisirwa kuitwa vanhukadzi pasi pehurumende yaVaTrump.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, Amai Esther Togara, vanoti vane shuviro yekuti hurumende yaVaTrump ichakwanisa kuita mabasa anobatsira nyika dzemuAfrica neZimbabwe.
Amai Togara vanoti vakafadzwa zvikuru nemabasa akaitwa nevari kusiya chigaro VaBarack Obama uye dayi vaikwanisa kuwana mukana wekutaura navo vaizovatenda nebasa ravakaita makore masere apfuura.
"Chiri kufadza ndechekuti tiri kuwona mafambisirwo ehurumende yejechetere sezvo vanhu veAmerica vakasarudza VaDonald Trump uye VaObama vari kusiya basa pasina mhirizhonga sezvinombowanikwa mune dzimwe nyika uye isu tinofunga kuti nyika inga dzidze zvakawanda kubva kune zviri kuitika muAmerica," Amai Togara vaudza Studio 7.
Interview With Esther Togara